tsy marina momba ny Coronavirus tao amin'ny facebook ka nampisahotaka ny olona tany an-toerana. Tandremo fa efa tonga ao Antananarivo ny Coronavirus, izay aretina mandringana ny maro, ka manao “prevention” “citron sans sucre/jour, misasa tànana sy vava orona amin’ny savony, miezaka tsy mifanoroka,… hoy ny hafatra naparitany. Tsy niandry ela ny fanjakana, fa nikaroka sy nisambotra avy hatrany mazava ho azy. Ny Lehiben’ny mpitandro filaminanana rahateo efa nanao fampitandremana mafy. Ny zava-misy hita miharihary amin’izao fotoana izao, dia zary ampiasaina hifamotehana sy hifanaratsiana ny facebook. Na ny ao anaty fanjakana aza somary tsikaritra, fa misy ny olona ambony toa mampiasa olona hanao izany hiarovana seza na fahefana. Ao ny manenjika sy manaratsy mpanao politika,… Efa mihatra ny lalàna momba ny heloka amin’ny internet sy ny tambajotran-tserasera na ny “cybercriminalité”, dia ny lalàna n°2014-006 tamin’ny 17 jolay 2014. Toa mbola maro anefa no tsy mahalala na tsy te hahalala. Mifangaro ny resaka fahalalahana sy fandikan-dalàna, hany ka toa samy manao izay saim-patany eto.